पहिलो नजर मा यो लाग्न सक्छ कि यस्तो रोग, यस्तो एनजाइना, पूर्ण अहानिकारक र कुनै पनि परिणाम पछि छोड्न सक्नुहुन्न। ज्वरो, दुखेको घाँटी, फ्रेंच - केही भन्ने गलत जस्तो देखिन्छ। तर हामी मानव शरीर मा निरन्तर को प्रतिरक्षाविज्ञानी र जीव रसायन प्रक्रियाहरू विचार भने, तपाईं पूर्ण आफ्नो मन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर, रोग को मुख्य कारण अप्रिय सुविधाहरू एक नम्बर छ जो धेरै बारम्बार वक्ता streptococcus छ। गलसुआशोथ को जटिलता एकदम, केही अवस्थामा गंभीर पनि जीवन खतरामा पार्ने हुन सक्छ।
वयस्क र यसको जटिलताहरू मा दुखेको घाँटी
स्थानीय र सामान्य, जो मृगौला क्षति, हृदय र जोइन्टहरूमा सक्छ: वयस्क मा दुखेको घाँटी को जटिलताहरू दुई प्रमुख समूह विभाजित गर्न सकिन्छ। तर, स्थानीय जटिलताहरू स्थानीय परिवर्तनहरू कारण छन्। मूलतः, तिनीहरूले रोगी एक खतरा धेरै बोक्न छैन, तर यो बाबजुद केही ध्यान आवश्यक।
रोग को स्थानीय जटिलताहरू समावेश:
को कण्ठ को सुनिंनु।
गलसुए देखि आक्रान्त।
एनजाइना: कसरी जटिलताहरू रोक्न?
त्यो अप्रिय परिणाम बच्न संक्रमण पछि, यो महत्त्वपूर्ण मुख्यतया समावेश केही नियम, पालना गर्न छ:
एन्टिबायोटिक - 5-10 दिन, तर तपाईं दिन3मा सुधार मा चिकित्सा टुटाउन सक्दैन;
जो रोगजनकों र गलसुए देखि purulent पट्टिका धुन गर्न अनुमति दिन्छ gargling,;
यस उपस्थित चिकित्सक को आवश्यकताहरु अनुपालनको;
तरल को ठूलो परिमाणमा को प्रयोग, विभिन्न toxins को excretion बढावा;
प्रतिरक्षा प्रणाली, मध्यम व्यायाम बलियो।
दुखेको घाँटी लागि एन्टिबायोटिक
दुखेको घाँटी लागि के एन्टिबायोटिक लग्नु गर्नुपर्छ? यो केवल उहाँले रोगी गर्न आवश्यक छ एंटीबायोटिक, सल्लाह दिन्छन् गर्न सक्छन्, भनेर उपचार नियुक्त डाक्टर सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। अब यो जीवाणुरोधी लागूऔषधको एक ठूलो रकम उत्पादन, तर ती सबै उपचार को लागि उपयुक्त हुन सक्छ। साथै, यो उपचार यसलाई गम्भीर लत बिरामीको शरीर हुन सक्छ रूपमा, को शक्तिशाली लागूपदार्थ fluoroquinol वा cephalosporins एक श्रृंखला सुरु र धूर्त रोग को प्रभावकारी उपचार को लागि बेकारी बन्न असम्भव छ। साथै, एन्टिबायोटिक पछि, जटिलताहरू, विशेष गरी छोराछोरीको उत्पन्न हुन सक्छ। जीवाणुरोधी लागूपदार्थ रोग विभिन्न प्रकारका लागू समूह विभाजित गर्न सकिन्छ। रोगनाशक ओषधि श्रृंखला कम विषाक्तता भएको र streptococci र staphylococci जस्तै शक्ति संग अभिनय गर्न सम्बन्धित एंटीबायोटिक को उपचार प्राथमिकता को सुरुमा चिकित्सक।
प्रोटीन को यो समूह एन्टिबायोटिक निकै pathogenic जीवाणु को सुरक्षा कार्य कमजोर जो जीवाणु कक्षहरूको चयापचय ब्लक गर्नुहोस्। एन्टिबायोटिक रोगनाशक ओषधि श्रृंखला के हुन्? सबै भन्दा लोकप्रिय समावेश:
अत्यधिक सक्रिय विरोधी-जीवाणु suppurative गलसुआशोथ को उपचार मा प्रयोग लागूपदार्थ। Cephalosporins आफ्नो थप विनाश प्रमुख, रोग-पैदा कक्षहरू नष्ट। बाल र वयस्क प्रयोग को उपचार मा:
गलसुआशोथ प्रयोग एन्टिबायोटिक तेस्रो समूह। रोगी रोगनाशक ओषधि एन्टिबायोटिक एलर्जी प्रकट घटनाको प्रबन्ध लागूऔषधको यो प्रकार। macrolides निम्न लागूपदार्थ समावेश:
एन्टिमाइक्रोबियलको नवीनतम पुस्ता
जब दुखेको घोक्रा को उपचार , धेरै चिकित्सक प्रयोग fluoroquinol - को XXI सताब्दी को लागूपदार्थ। को cephalosporin र रोगनाशक ओषधि एंटीबायोटिक उपचार fluoroquinol अत्यधिक लत रूपमा, सकारात्मक परिणाम ल्याउन गर्नुभयो गर्दा मात्र तिनीहरूलाई सल्लाह दिन्छन्।
यी निम्न लागूपदार्थ समावेश:
रोग समयमा सकारात्मक गतिशीलता गर्दा एंटीबायोटिक लागू तेजी हुन्छ, तर केवल उपचार साँच्चै राम्रो छानिएन गरिएको अवस्था छ। वयस्क मा गलसुआशोथ लागि एन्टिबायोटिक ट्याब्लेटको को रूप मा प्रशासित। छोराछोरीको प्राथमिकता को उपचार मा इंजेक्शन दिएको हुन सक्छ, तर केवल यदि रोग सबै संकेत छन् र त्यहाँ एक उच्च पर्याप्त तापमान छ। एक एंटीबायोटिक - साथै, यस्तो दबाइ व्यापक जसको मुख्य सक्रिय संघटक एक स्प्रे, को रूप मा प्रस्तुत "Bioporoks" रूपमा प्रयोग। तर एउटै स्थानीय चिकित्सा मा रोग को causative एजेन्ट शरीर भित्र नष्ट गर्न किनकी, भित्र संग संयुक्त गर्नुपर्छ।
हामी एन्टिबायोटिक राम्ररी लिन
गलसुआशोथ संग Antibacterials भने मात्र एक औषधिको खुराक ठीक लिएको एक उच्चारण चिकित्सकीय प्रभाव दिनेछु।
त्यहाँ सबैभन्दा प्रभावकारी बनाउन चिकित्सा एंटीबायोटिक कसरी धेरै सुझावहरू छन्:
उपचार सुरु गर्नु अघि, यो रोगजनक को प्रकार पहिचान गर्न आवश्यक छ: प्राप्त microflora मा परीक्षण;
चिकित्सक नामित दबाइहरु अनुसार यस चिकित्सकीय प्रभाव लागि आवश्यक भन्नुभयो खुराक संग लिइएका छन्;
जीवाणुरोधी लागूपदार्थ संग उपचार कम्तिमा 10 दिन, अपवाद एंटीबायोटिक कार्य सम्हाल्नुभएको छ जो मामला मा पारित हुनुपर्छ - "Sumamed";
रोगी कुनै पनि दबाइहरु एलर्जी छ भने, चिकित्सक सधैं यो को जानकारी हुनुपर्छ;
पेय लागूपदार्थ विशेष पानी हुनुपर्छ;
एंटीबायोटिक भोजन वा अघि एक घण्टा पछि लाग्न;
साथ निर्धारित गर्ने आंत्र microflora पत्र कि probiotics को पाठ्यक्रम जीवाणुरोधी लागूऔषधको स्वागत छ।
यी सबै नियम अभ्यास सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ भने, गलसुआशोथ को उपचार मात्र प्रभावकारी हुन, तर एन्टिबायोटिक पछि अप्रिय परिणाम निम्त्याउन छैन।
एनजाइना र हृदय जटिलताहरू
अक्सर गलसुआशोथ पछि यस्तो उपाध्यक्ष र हृदयको पनि rheumatism जस्ता अप्रिय खतरनाक रोगहरु, हुन सक्छ। लडाई संक्रमण समयमा र पुन: अवधिमा intensively अक्सर unpredictably मुख्य रूप विशेष संयोजी ऊतक को गठन को बढावा दिन प्रोटीन को दमन मा व्यक्त गरिएको छ जो मानव शरीर, असर गर्न सक्छ, जो तथाकथित एंटीबडी, विनियोजन सुरु। यो त scars मा रूपान्तरित जुन nodules, को गठन मा परिणाम। फलस्वरूप, हृदय वाल्व को राम्रो-स्थापित काम असफल र उपाध्यक्ष गर्न जान्छ।
सुनिंनु, हृदय को मांसपेशी हानिकारक - यो खतरनाक रोग बाट अलग, हृदय मा गलसुआशोथ को एक उलझन नै myocarditis को रूप मा प्रकट हुन सक्छ। यो रोग द्वारा विशेषता छ छिटो धडकन, घाँटी, cyanosis, तल्लो चरम र सास को shortness को edema स्थित नसाहरु को सुनिंनु, असह्य दुखाइ, हृदय दर को विफलता।
यी जटिलताहरु सबै आफ्नो खुट्टामा पीडित, रोग पछि उत्पन्न हुन सक्छ। सबै चिकित्सक आदेश सख्त उत्सव र समसामयिक र योग्य उपचार - त्यसैले एक पटक फेरि, यो रिकभरी को ग्यारेन्टी र गंभीर परिणाम को गलसुआशोथ पछि जोखिम हटाउनु भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
एनजाइना: को अन्तस्करणले को जटिलताहरू
को अन्तस्करणले मा गलसुआशोथ सम्भावित जटिलताहरू। रोग को खतरनाक परिणाम त्यस्तो glomerulonephritis रूपमा रोगहरु, र तथाकथित pyelonephritis समावेश गर्नुहोस्।
Pyelonephritis - मृगौला सुनिंनु, पुरानो चरण मा पारित। को मृगौला मा रोग को यस फारममा पीप, स्राव र थैली ऊतक क्षय उत्पादनहरु भरिएका हुन्छन् जो धेरै cavities गठन।
Glomerulonephritis - त्यहाँ एक द्विपक्षीय गुर्दे विफलता, पर्याप्त भविष्यमा मानिसहरूलाई खतरनाक गुर्दे विफलता गर्न सक्छ, जो एक रोग। फलस्वरूप, रोगी एक अंग प्रत्यारोपण र hemodialysis द्वारा मात्र सुरक्षित गर्न सकिन्छ। एनजाइना, जटिलताहरू, जो को लक्षण बलियो ज्वरो, ठंड लाग्न र ज्वरो को रूप मा व्यक्त गर्दै छन्, पीठ तत्काल उपचार आवश्यक गम्भीर रोग भन्छन्।
बच्चाहरु र यसको जटिलताहरू मा दुखेको घाँटी
को जटिलताहरू छोराछोरीको दुखेको घाँटी एक को रूप मा नै प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ retropharyngeal विद्रधि, को घाँटी र मेरुदण्ड पछाडि मा pustular formations विकास द्वारा विशेषता छ जो। यो बच्चाहरु लसीका नोड्स हुन् भनेर यहाँ छ।
जटिलताहरुलाई यस प्रकारको वयस्क सक्दैन मा उत्पन्न जो संग लसीका नोड्स गायब, जडान मा को जन्म पछि6वर्ष। तर छोराछोरीलाई यो रोग नकारात्मक श्वसन प्रक्रिया, जो फलस्वरूप निसासिने काम सक्छ असर गर्छ। सर्जरी सर्जन festering दुखेको, को कण्ठ को क्षेत्र मा स्थित प्रकट गर्ने, सर्जरी समयमा आवश्यक हुनेछ त्यस्तो नतिजा रोक्न।
जटिलता: कसरी आफ्नो कान दुखेको घाँटी असर गर्न सक्छ?
के कान मा गलसुआशोथ को एक उलझन हुन सक्छ? गलसुआशोथ कारण संक्रमण, को maxillary sinuses मा प्राप्त र यस्तो खराब sinusitis या sinusitis हुन सक्छ। केही अवस्थामा, रोग बीचमा कान, पीप को संग्रह को एक ठूलो संख्या द्वारा विशेषता समस्याहरू हुन सक्छ। यो रोग त otitis रूपमा नाम छ। साथै, भडकाऊ प्रक्रिया भित्री कान मा जान सक्नुहुन्छ - labyrinthitis।
यो सबै बाहेक, laryngeal edema फारम गर्न सक्छन्। यस मामला मा सुनिंनु submandibular र ग्रीवा लसीका, meninges, थाइरोइड ग्रन्थि उजागर गर्न सकिएन। फलस्वरूप, र त्यहाँ मानिसहरूलाई धेरै खतरनाक छ मेनिनजाइटिस छ।
कारण स्वास्थ्य को बिरामीको राज्य सुधार गर्न एंटीबायोटिक उपचार को पूर्ण समाप्ति पछि केही दिन quinsy, वा paratonzillit जस्ता रोगहरु देखा पर्न सक्छन्। पहिले देखि नै छ जो निरन्तर, दुखाइ र लसीका बिन्दुहरुको सुनिंनु, slurred बोली र अस्पष्ट, लगातार लालास्रवण ज्वरो, दुखेको घाँटी,: रोगी को स्थिति मा तेज गिरावट को एक परिणाम फेरि अवलोकन छ रूपमा। को घाँटी मा त्यहाँ गंभीर दुखाइ निम्त्याउँछ जो घाँटी खोल्दै गर्दा विद्रधि छ।
को भडकाऊ प्रक्रिया कि सामान्य निद्रामा रोक्छ र खान भनेर गम्भीर नशा गर्न प्रमुख, मानव शरीर मा हुन्छ। फलस्वरूप, एक व्यक्ति चेतना गुमाउन सक्छ। बलियो एंटीबायोटिक - यो उपचार, मात्र एक।
एनजाइना देखि जटिलताहरू: हिरासत मा
गलसुआशोथ पछि प्रभाव नै रिकभरी केही हप्ता पछि लाग्यो, र धेरै पहिले केही अवस्थामा बनाउन सक्छ। त्यसैले, यो मन मा राख्न महत्त्वपूर्ण छ:
माथि दिन छैन को बेचैनी, संक्रमण गलसुए मा स्थित छ, किनभने गायब हुनेछ पनि पछि अन्य अङ्गहरू उत्प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ, घाँटी rinsing।
उपचार गम्भीर रूपमा लिइन्छ हुनुपर्छ गर्न: सबै निर्देशन पालन र पूर्ण उपचार undergo गर्न चिकित्सक। सम्झना, एनजाइना जटिलता तपाईंको स्वास्थ्य ठूलो हानि ल्याउन सक्छ।
रोग पछि शारीरिक तनाव र निर्मूल गर्न आवश्यक छ hypothermia। पटक-पटक चिसो गम्भीर जटिलताहरू गर्न सक्छ।
भिटामिन को शरीर का नियमित पाठ्यक्रम अझ बलियो उछाल मात्र रोग रूपमा सजिलै सकेसम्म हस्तान्तरण हुनेछ, तर पनि गलसुआशोथ को अप्रिय प्रभाव बच्न।
डरलाग्दा संकेत ध्यान मात्र रोग समयमा, तर पनि पछि - एक निश्चित मौका छ कि मानव शरीर मा उत्पन्न कुनै पनि परिवर्तन गर्न प्रतिक्रिया गर्न।
आफ्नो स्वास्थ्य चासो लागि कारण ध्यान सधैं छ, र यो तिमीलाई कहिल्यै पनि। बिरामी हुन छैन र ठीक र समय उपचार भइरहेको छ! यस उपस्थित चिकित्सक को सहायता र एन्टिबायोटिक को एक पाठ्यक्रम बिना आफ्नै गलसुआशोथ आफैलाई भर छैन र प्रयास छुटकारा गर्न।
नाक polyps: उपचार सर्जरी बिना। नाक उपचार लोक उपचार मा polyp
चिकित्सा शब्द "proliferation" कसरी व्याख्या गर्ने? यो प्रक्रिया के हो?
माध्यमिक hypothyroidism: कारणहरू, लक्षण र उपचार
Septicemia छ? कारण, लक्षण, निदान र septicemia को उपचार
जीवित लागि वालपेपर डिजाइन। जीवित कोठा लागि वालपेपर: उदाहरणहरू संग समाप्त फोटो
Lasagna Lavash र कीमा चिकन - धेरै छिटो र सन्तोषजनक भोजन
Pinosol मलम - प्रयोगको लागि निर्देशन
कार अलार्म गोही एस-875RS: स्थापना र सञ्चालन लागि निर्देशन, समीक्षा